I-Polyethylene Glyeol 200
Ukwakheka Kwamakhemikhali: Uhlobo lwe-ethylene oxide condensate: Ukucaciswa kwe-nonionic: PEG200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Izicelo Eziyinhloko: Uketshezi lomlomo lusetshenziselwa isisombululo somlomo namanye ama-solvent oketshezi, ikakhulukazi ine-solubilization enhle yepropolis equkethwe kumikhiqizo yokunakekelwa kwempilo yochungechunge lwepropolis, ngokwesibonelo, i-oral propolis, amaphilisi athambile njalonjalo. Ukupakisha Indlela: 50kg plastic sigubhu Shelf ukuphila: Iminyaka emithathu Quality Standard: CP2015 Isitoreji a ...
I-Polyethylene Glyeol 300 I-PEG 300
Izicelo Eziyinhloko: Lo mkhiqizo awunabuthi, awucasuli futhi unokuswenka okuhle kwamanzi, ukuhambisana, ukuthambisa, ukunamathela nokuqina kokushisa. Ngakho-ke, uchungechunge lwe-PEG-300 lufanelekile ukulungiselela amaphilisi athambile. Inokuhambisana okubanzi nezinhlobonhlobo zamakhemikhali awuketshezi, ngakho-ke iyisixazululo esihle ne-solubilizer futhi isetshenziswa kakhulu kumalungiselelo oketshezi, njengesixazululo somlomo, amaconsi wamehlo, njll. Indlela Yokufaka: 50kg isigubhu seplastiki seShelf Life: Iminyaka emithathu Ikhwalithi Okujwayelekile: Isitoreji se-CP2015 kanye ...
Isicelo Esiyinhloko: amaphilisi, ijazi lefilimu, amaphilisi, amaphilisi, amakhosethi nokunye. Njengenqubo yokukhiqiza, i-plasticity ye-polyethylene glycol, ikhono layo lokuthuthukisa amandla wamathebulethi wokukhipha umuthi kanye ne-PEG (PEG4000 ne-PEG6000) enesisindo esiphakeme samangqamuzana kuyasiza kakhulu njengokubambelela ekwenzeni amaphilisi. I-polyethylene glycol inendawo ecwebezelayo nebushelelezi futhi kunzima ukuyilimaza. Ngaphezu kwalokho, ama-PEGS ambalwa (i-PEG4000 ne-PEG6000) anesisindo esiphakeme samangqamuzana angavimbela ukubopha ...
I-Polyethylene Glyeol 6000
I-Polyethylene glycol isetshenziswa kakhulu emalungiselelweni amaningi okwenziwa kwemithi, njengemijovo, amalungiselelo ezinto ezisetshenziswayo, amalungiselelo e-ophthalmic, amalungiselelo omlomo nawama-rectal. I-solid polyethylene glycol ingangezwa nge-polyethylene glycol ewuketshezi ukulungisa i-viscosity yamafutha asematheni; ingxube ye-polyethylene glycol ingasetshenziswa njenge-suppository matrix; Isixazululo samanzi se-polyethylene glycol singasetshenziswa njengosizo lokumiswa noma ukulungisa i-viscosity yeminye imidiya yokumiswa; polyethylene glycol futhi o ...